China yoshicilelo lapel pin mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Eyona ndlela isebenzayo
Ezi zikhonkwane zihlala zisetyenziswa ngabathengi kwiminyhadala emikhulu yokwazisa, iilogo zenkampani, kunye neminyhadala yesikhumbuzo Uya kufumana izikhonkwane zakho zesiko malunga neveki.
Xa sifumana uyilo lwakho, siya kucela umyili wethu ukuba akuzobele. Xa uqinisekisa lonke ulwazi esiza kulukhupha ngokwe-drawing.Our izinto zethu ezingundoqo ingxubevange zinc, ukuba ufuna ezinye izinto, nathi sikwazi ukuvelisa. Ixesha lokuvelisa: iintsuku ezingama-5-7 zeshishini emva kokuvunywa kobugcisa. Imveliso ekhawulezileyo iyafumaneka.
Izikhonkwane zesinyithi esenziwe ngokwezifiso ngokuziqhenya zenziwe eMelika Iinqanawa ngeentsuku ezintlanu zomsebenzi.
Inyathelo lokuqala leebheji zethu zihlala ziqinisekisa ukuzoba kwaye emva koko silungiselele imveliso. Okokuqala, kuya kuthatha iintsuku ezingama-3-5 ukwakha imveliso entsha endiyibumbayo. Okwesibini, kufuneka sikhuphe iimveliso. Kule nxalenye, amandla ethu emveliso yemihla ngemihla amalunga ne-10000pcs ngomatshini ngamnye. Okwesine, phrinta uyilo lwemveliso.Ukuba sifuna i-epoxy, singayongeza kule mveliso kwakhona, ethi iphinde ibe yenye inkqubo.Ungakhetha isitayile osifunayo!
Izikhonkwane ezenzelwe ukuPrinta i-Lapel ye-Custom Offset zigqibelele izikhonkwane zedijithali ezigqibeleleyo zoyilo ezisebenzisa iifoto kunye nemizobo okanye ezifuna ezinye iinkcukacha ngombala. Ziyindlela efanelekileyo yokwenza ubugcisa besiko obusebenzisa iigradients okanye izithunzi ezilahlayo. Uyilo ngalunye lwesiko lwenziwe kwifayile yedijithali, eprintwe ngqo kwiphepha elikumgangatho ophezulu eligxunyekwe kwisiseko sesinyithi, kwaye iqhosha ligqunywe nge-epoxy ecacileyo yokugqibezela okuthe tye ukukhusela ikhonkco lakho le-lapel kwiminyaka ezayo.
Zenziwe njani izikhonkwane zedijithali zoshicilelo lwedijithali. Ngokungafaniyo ne-eamel enzima, i-enamel ethambileyo, kunye nezikhonkwane zokufa ezinamathelayo, izikhonkwane ze-lapel ezenziwe kusetyenziswa inkqubo yedijithali yokulinganisa zibethe kwaye zigudile. Izikhonkwane zedijithali ezenziwe ngokwezifiso zakho kukucofa imibala enemibala kunye nemifanekiso entsonkothileyo okanye uyilo. Akukho thuba lemibala ebalekayo okanye eyophayo, kwaye isicatshulwa sivela sikrwada kwaye kulula ukusifunda nokuba ukhetha owuphi umbhalo. Izikhonkwane zedijithali ezingasasebenziyo zinokugqitywa okucwebezelayo okuhlala ixesha elide. Akukho sidingo sokukhathazeka ngothuli okanye ukuqokelela ukungcola kuba akukho ndawo ikhutshiweyo. Iphini egudileyo iyala ukubamba iijezi okanye imisonto, kwaye zinokwenziwa nakweyiphi na imilo onokuyicinga. Ubungakanani boqala kwi-3/4-intshi ukuya kwi-intshi ezi-2, kwaye ubungakanani beodolo bufumaneka kwi-100 ukuya kwi-10,000 +.
Egqithileyo 2D pin ibheji
Okulandelayo: Abengezelayo Lapel Izikhonkwane
Izikhonkwane zedijithali zokuprinta